Liiska Kombuyuutarrada Gawaarida leh ee Maqaalka ah ee loogu talagalay shabakadda internetka ee loo yaqaan 'Expert Expert'
Ka helitaanka macluumaadka bogagga shabakadaha ama bogagga shabakadaha illaa dukumintiyada falanqaynta ah iyo qiimaha kala-guurka (CSV) ayaa fududeeyay. Soo saarista macluumaadka Webka, oo sida badan loo yaqaan shabakadda webka , waa hab lagu soo saaro xog badan oo ka timid goobaha.
Sida loo Isticmaalo Chrome Web Scraper
Haddii aadan haysan wax aqoon ah oo barnaamijka ah, barnaamijka kaydka webka ayaa laguu dejiyey adiga. Dhawaan, farsamooyin kale oo sahlan oo la adeegsan karo ayaa la soo saaray. Adiga oo isticmaalaya google-ka Google-ka ee dheeraadka ah ee bilaashka ah ee dukaamada shabakadda Google, waxaad hadda ku dari kartaa jaridda shabakadda. Halkan waxaa ku qoran liis dheer oo ku saabsan kordhinta Chrome si aad u tixgeliso.
Sawir sawir leh waa mid ka mid ah koodhadhka ugu muhiimsan ee Chrome-ka ah ee badiyaa loo isticmaalo sawirrada. Kuwa bilowga ah, xoqitaanka sawirku waa farsamada ah in laga baxo oo laga saaro macluumaadka bogagga internetka iyo goobaha. Haddii aadan haysan khabiir qoto-dheer, tixgeli sawir-qaadista goorta nidaamka uu yahay mid si otomaatig ah u shaqeynaya.
Xogta laga soo qaaday boggaga isticmaalaya "Screen Scraper Chrome plugin" ayaa lagu soo daabici karaa faylka JSON ama CSV. Fidinta Tani waxay taageertaa qaabka Xulashada Xeerarka iyo Element-ka labadaba. Screen Scraper waa sahlan oo bilaash ah si loo isticmaalo dheeraadka ah ee loo diyaariyo dukaamada shabakadda internetka ee Chrome.
Web Scraper waa kordhin Google Chrome oo ka soo saara xogta laga helo goobaha isticmaalaya bogga. Xogta laga soo duubay boggaga internetka oo isticmaalaya faahfaahin dheeraad ah ayaa lagu kaydiyaa faylka CSV ama CouchDB. Iyada oo bogsiin, waxaad si wax ku ool ah u isticmaali kartaa Web Scraper si aad u xoqdo bogag ama bogag badan. Kiisaska intooda badan, kordhinta browserka kumbuyuutarkan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro macluumaadka sida xiriirka, qoraalka, iyo miisaska.
Imacro Web Digraace
iMacro waa fiilo browser ah oo loo adeegsado baaritaanka webka. iMacro waxay u shaqeysaa iyada oo la duubo ficilada dhamaadka-isticmaalaha inta lagu jiro booqashooyinka. Kormeerkan kormeeraha Chrome wuxuu qorayaa hawlaha shabakadaha si loo isticmaalo tixraaca mustaqbalka. Haddii mashruucaaga hadda uu ku jiro tijaabada waxqabadka ama imtixaanka shabakada regression, kani waa fiilada si loo siiyo tallaal.
Sida loo Isticmaalo Chrome Web Wareega
IMacro, si fudud ayaad u soo dejisan kartaa faylasha una xasuustaa xisaabtaada sirta ah. Faahfaahinta IMacro waxaa laga heli karaa bilaash ah dukaanka internetka Firefox, Internet Explorer, iyo Chrome browser.
Maanta, helitaanka macluumaadka si fiican loo diiwaangeliyay ee bogagga internetka ma aha mid fudud. Tani waa halka laga soo galo barnaamijka. Macdanta Macluumaadku waa siyaado dheeraad ah oo la adeegsado si loo isticmaalo macluumaad faa'iido leh oo laga helo bogagga internetka. Isticmaalida fiilada browserka ah, waxaad ka heli kartaa xogta goobaha oo waxaad u dhoofin kartaa xogta Google Waraaqaha ama Foomka Excel.
Faahfaahinta Macdanta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xoqo jadwalka HTML iyo in macluumaadka loo gudbiyo feylka Microsoft Excel ama CSV. Haddii aad khabiir ku tahay isticmaalka Xildhibaanka XPath, kani waa fiilo browser ah adiga.